Shiinaha Jumlada 3 Nylon oo si toos ah u keenaya madax iyo shirkado soosaarayaal ah - GRX GARMENT (HONG KONG) CO., LTD.
Hoyga > Madaxa jiinyeer > Daawaha Zinc madaxa automatic > 3 Nylon madaxa otomaatiga ah
3 Hordhaca badeecada madaxa ee Nylon: 3kan madaxa ee naylonka ahi wuxuu ka samaysan yahay daawaha zinc Yurub iyo Ameerika. Shirkadda ayaa maray ISO9001: 2008 shahaadada nidaamka maaraynta tayada.
3Nylon madaxa tooska ah
GRX GARMENT (HONG KONG) CO., LTD. waa soo saare wax soo saar ah oo ka kooban waxyaabaha jiinyeerka ee taariikhdiisu tahay in ka badan 10 sano. Shirkaddu waxay raacdaa nidaam wax soo saar si adag loo xakameeyo iyo shaqaale xirfadlayaal ah oo si fiican u tababaran.Aqoon-isweydaarsigeennu wuxuu ku qalabeysan yahay: farsamo yaqaanno xirfadlayaal ah waxay hubiyaan heer kasta, oo si weyn u damaanad qaadaya tayada qalabka 'zipperproducts'.
1.3 Wax soo saar madaxa oo otomaatig ah
Madaxan 3-da ah ee naylonka ahi wuxuu ka samaysan yahay zincalloy Yurub iyo Mareykan ah. Shirkaddu waxay dhaaftay ISO9001: nidaamka shahaadaynta nidaamka maaraynta tayada 2008. Waxay leedahay tiro shatiyeedyo ah. Dhammaan alaabooyinka ayaa ka gudbay SGS waxayna dhaafeen baaritaanka. Suuqa dhex dhig, soo bandhig nidaam maamul tayo leh oo badeecad dhammaystiran, si joogto ah u hagaajiya qalabka kala duwan iyo barnaamijyada software-ka, kuna dadaal inaad suuqa la qabsato tayo.
2. 3 Nylon waxsoosaar madax oo otomaatig ah (qeexitaanno)
Cabirka gudaha gudaha: Dhererka Afka: 2.1MM
Baaxadda Afka: 4.3MM
Dharka tolidda: 0.85MM
Saldhigga aasaasiga ah: 1.8 MM
3. Astaamaha alaabta iyo codsiyada ee3Nylon madaxa tooska ah
Madaxan otomaatiga ah ee loo yaqaan 'zinc alloy automatic' ayaa inta badan loo isticmaalaa dhinacyada hore ee dharka, jeebabka, dharka guriga, alaabada lagu ciyaaro, iyo boorsooyinka dhamaadka sare leh.
4. Faahfaahinta alaabta ee 3 nylon automatichead
5. U qalmida wax soo saarka ee3Nylon madaxa tooska ah
Shirkaddayadu waxay ka gudubtay shahaadada nidaamka maaraynta tayada ee ISO9001: 2008, waxay leedahay tiro shatiyadeed, waxay soo bandhigeysaa nidaamka maareynta tayada wax soo saarka oo aan dhameystirneyn, waxay si isdaba joog ah u hagaajineysaa qalabka kaladuwan ee kaladuwan iyo barnaamijyada, waxayna ku dadaalaysaa inay suuqa la gasho tayo.
6. Baako iyo gaarsiinta3Nylon madaxa tooska ah
Calaamadaha kulul: 3 Nylon madaxa otomaatiga ah, Shiinaha, Jumlada, Jumlada, Alaab-qeybiyeyaasha, Soosaarayaasha